Sababta ka dambeysa in Al-shabaab ay Gubaan Gawaari dhawaan ku socdaalayay deegaanada KGS-DHEGAYSO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Sababta ka dambeysa in Al-shabaab ay Gubaan Gawaari dhawaan ku socdaalayay deegaanada KGS-DHEGAYSO
Sababta ka dambeysa in Al-shabaab ay Gubaan Gawaari dhawaan ku socdaalayay deegaanada KGS-DHEGAYSO
June 4, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Kadib markii dhawaan Urarka Al-shabaab ay Gobolka Bakool ku gubeen 13 Gaaar ayaa waxaa ka soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan sababta ka dambeysa gawaaridan ay gubeen shabaabku.
Gawaarida la gubay ayaa markii hore waxaa ay ka soo kicitimeen magaalada xudur ee Xarunta Gobolka Bakool iyagoona ku sii jeeday Beledweyne oo ah halkii markii horaba ay ka yimaadeen, hase yeeshee gawaarudan markii ay marayeen deegaan lagu magacaabo isfiilato oo qiyaastii 5oKM u jirta Xudur ayay wadada u Galeen dagaalyahaano ka Tirsan shabaab iyagoona Rasaas oodda uga qaaday dadkii saarnaa gawaaridan.
Xoogga al shabaab ee jidka u galay gawaarida ayay markii dambe u suura Gashay inay Gacanta ku dhigaan 13 ka mid ah Gawaaridii ay weerareen walow md kamid ah gawaaridaasi uu ka badbaaday sida uu inoo sheegay C.fitaax sh.maxamed oo ah Godoomiyaha Deegaanka qurac Joome ee Gobolka Bakool.
Wareysi uu siiyey Horsed media ayuu gudoomiyaha Deegaanka qurac Joome ee Gobolka Bakool sidoo kale ku sheegay in dayacaad xoogan oo dhanka amniga ay sameeyeen Maamulka Xudur ay sabab u noqotay in al- shabaab ay Gubaan gawaarida ay saarnaayeen dad rayid ah sida uu sheegay gudoomiyaha.
Waxa uu qiray gudoomiyahan in ay jirto xaalad amaan darri oo haysata dadka kunool deegaanada gobolka Bakool iyagoo taa ogna uu maamulka gobolka Bakool ku wargelin wax ka qabashada iyo la socoshada dadka ku safraya deegaanadaasi hadii lagu soo wargelin lahaana ay iyagu ciidamo badbaadiya u diri lahaayeen halkaasi.
Habada hoos ka dhageyso wareysiga gudoomiyaha oo uu la yeeshay Aweys Bashiir c.raxmaan